Spool Ties Manufacturers na Suppliers | China Spool Ties Factory
Helical spool tie e mepụtara ka e meere-eduzi ya aka n'akụkụ nke uzo nke spool insulator.
Preformed insulator spool agbatị na-mere nke aluminum kpuchie ígwè, aluminum, galvanized ígwè ihe.
Onye ọ bụla waya kpụrụ spool tie ọzọ onwem na ihe Elastomeric tie tube, nke e mere ka ibelata oge mîkayarakede mua USB na spool insulators. Na-enye elu nketa na ọkụ arụmọrụ na kacha mma mkpuchi e ji mara nke etinyere ngalaba.
Insulator spool tie na-eji maka ọtọ efe n'elu bundled eduzi na MV na HV ike nnyefe netwọk. Ha na-bu n'obi ibu akara akụkụ karịa n'elu uzo style agbatị.
Jera si helical spool tie-enye obi ike nchebe maka USB n'oge kasị ahụkarị ụdị ngagharị: vibration, galloping na-arụnyere na spool ụdị insulator.
Jera bụ ike ịzụlite preformed nwụrụ anwụ nsọtụ na preformed spool agbatị dị ka gị cable nkọwapụta, insulator n'olu dayameta na anya n'etiti okporo osisi ya.